Isidlo Esinamandla Futhi Isitebhisi Esiphephile
Ake ngikukhombise isitebhisi sethu esisha sokugoqa esiphephile nesiphathekayo: Uma unentshisekelo kuso, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi: info@abctoolsmfg.com
Isihlalo sesitifiketi esinelungelo lobunikazi siyeza….
Wake waba nalesi simo esilandelayo: Amakhethini kufanele ehliswe futhi agezwe, kepha indle ayiphakeme ngokwanele ukufinyelela. Izinto ezingaphezulu kwekhabhinethi azikwazi ukufinyelelwa, ngakho nginyathela ngqo esihlalweni sehhovisi. Lezi yizimo ezizovela i ...
Ngokuya ngemininingwane ekhishwe yiNational Bureau of Statistics of China namuhla, ekuqaleni kuka-Ephreli 2021, uma kuqhathaniswa nasekupheleni kukaMashi, amanani emakethe wezinto ezibalulekile ezingama-50 zokukhiqiza nemikhiqizo engama-27 emkhakheni wokusakazwa kukazwelonke akhuphukile. Phakathi kwazo, intengo ye-ste ...
Ungazinciphisa kanjani izindleko zokugcina impahla
Ukuphathwa kwezindleko zokugcina kubhekisa ebhizinisini ekuphathweni kwesitoreji sanoma yiziphi izindlela zokugcina ezidingekayo zokulawula izindlela, inhloso yezindleko zokugcina eziphansi kakhulu ukufeza ikhwalithi yesitoreji esichazwe ngaphambili nenani lesitoreji, kufaka phakathi yonke imizamo yokwehlisa ...
Izitayela eziyisithupha ekwakhiweni kwemboni yemishini yokugcina impahla
Ukuthuthukiswa kwemboni yemishini yokugcina impahla yesimanje kunemikhombandlela eyisithupha eyinhloko: ukuhlanganiswa kwempahla ebanzi, ukukhuthaza inqubo yokuphakela kabusha; Ukuhlanganiswa okujulile kwezinsiza zokugcina ukuxhasa ukuthuthukiswa kwe-e-commerce; Ukusungulwa kwamarerehous ahlakaniphile ...
Amashalofu e-Walmart amarobhothi esemsebenzini
I-Walmart isanda kufaka irobhothi eshalofini kwezinye zezitolo zayo zaseCalifornia, ebelithwebula amashalofu njalo ngemizuzwana engama-90, ngamaphesenti angama-50 ngokusebenza kahle kunomuntu. Ishalofu irobhothi. I-JPG Irobhothi elisheshayo lingamamitha ayisithupha ubude futhi linombhoshongo wokudlulisela ogibele ikhamera.Ikhamera isetshenziselwa ukuskena ...
Okokuqala ezweni! Itheku laseShandong libeka "iso lokuhlakanipha" ezikebheni zokudonsa
Muva nje, shandong port Qingdao ukuhlakanipha ukwakhiwa kwembobo eluhlaza kwengeze imiphumela emisha, ngokuzimela yinkampani ye-barge yenkampani yesondo le-Qingdao, ehola ucwaningo nentuthuko ye- "tug panoramic system yokukhiqiza isithombe sokuphepha" efakwe ngokusemthethweni ekusetshenzisweni kokukhiqiza, kwentaba yokudonsa "w ...
Qingdao Port Isifundazwe Shandong: Model Light Shining 2021
Isikhathi siyaqhubeka, umzabalazo uyaqhubeka.Imodeli ngoJanuwari 1, 2021, "isikhathi" "ngisho nethimba lezinsimbi zensimbi" elizenzakalelayo ngokuphelele ethekwini laseQingdao okuyindawo yokuzalwa yesiteshi sesitsha se-shandong port, engenisa uNyaka Omusha ukusebenza komkhumbi wokuqala wesitsha - 299 - amamitha ...
Ukusetshenziswa nokuhlukaniswa kwamashalofu omsebenzi osindayo
Okokuqala, ngoba amashalofu asindayo kumele enze umsebenzi omuhle wokuhlukanisa, ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ibekwe ngendlela, okwesibili, kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ngamunye unebanga elithile phakathi komunye nomunye, ukuze kungabikho ukukhishwa phakathi imikhiqizo, ukuze ukulahleka komkhiqizo ...
Imiyalo yokuphepha yokusetshenziswa kwamashalofu omsebenzi osindayo
Ukusetshenziswa eshalofini elinzima ukuvimbela okusindayo: kufanele kwenziwe ukubeka izimpahla ezilula phezulu, phansi komgomo wezimpahla ezisindayo. Ukugcwala ngokweqile kufanele kuvinjelwe ekusetshenzisweni kwamashalofu asindayo: isisindo sendlalelo ngayinye yezimpahla akufanele seqe umthwalo omkhulu wamashalofu aklanyelwe. Isisindo esisindayo ...
Indawo yokugcina impahla isebenzisa izinzuzo zokugcina amashalofu
1. Indawo yokugcina impahla inezinhlangothi ezintathu, ezingasebenzisa ngokugcwele isikhala sokugcina impahla, zithuthukise izinga lokusetshenziswa komthamo wokugcina impahla futhi zandise umthamo wokugcina impahla. 2. Ukufinyelela okulula kwezimpahla, ikhono lokukhetha izimpahla ngaphakathi nangaphandle, inzuzo engenayo ebushelelezi. 3, izimpahla engi ...
I-Best Garage Shelving - 1
Iningi labantu abanegaraji lijwayele isiko lonyaka lokuhlanzwa kwentwasahlobo. Yilapho uthatha khona zonke izinto ezingasetshenziswanga kaningi ekhaya ezaziphonswa egaraji ngaphandle kwenkathazo enkulu noma inhlangano futhi uzisebenzise, ​​ukuthola ukuthi yini oyifunayo ...
Ishelufu Yesitoreji Esincane Amayunithi Wokugcina Amasheya Okuhweba I-White Storage Shelf Unit Amashalofu Ekhaya Amayunithi Wokushefa Amakamelo Okulala Indawo Yokubeka Amashelufa